रेमिट्यान्स तीन प्रतिशतले मात्र घट्यो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे - नेपालबहस
रेमिट्यान्स तीन प्रतिशतले मात्र घट्यो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे
| २२:१०:०६ मा प्रकाशित
१ साउन, काठमाडौं । कोरोना महामारीले सिर्जित गरेको लामो लकडाउनका कारण रेमिट्यान्स घट्ने प्रक्षेपण भईरहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जेठ मसान्तसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले मात्र गिरावट देखिएको छ । नेपालका अधिकांश रेमिट्यान्स कम्पनीले अब रेमिट व्यापारमा गम्भीर चुनौती आउने कोकोहोलो मच्चाईरहेको समयमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङले भने आत्तिनु पर्ने अवस्था नदेखाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार गत आवको जेठ मसान्तसम्म रु सात खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ५.१ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत,नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ३५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ३१.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारीका कारण प्रमुख श्रम गन्तव्य समेत समस्यामा परेकाले नेपाली कामदारले रेमिट्यान्स पठाउन नपाएका हुन् । गत जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा खुद ट्रान्सफर आयमा ३.६ प्रतिशतले कमी आई रु आठ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १६.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत दाल गेडागुडी, सुर्तीजन्य वस्तु, मसला, अल्कोहलिक पेय पदार्थ र फलफूल उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा ४.४३ प्रतिशत, तराईमा ४.८६ प्रतिशत, पहाडमा ४.१३ प्रतिशत र हिमालमा ४.३४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७६ जेठमा ती क्षेत्रहरुमा क्रमशः ७.१० प्रतिशत, ५.८० प्रतिशत, ५.७० प्रतिशत र ६.४६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
सन् २०२० मा यूरो क्षेत्रको मुद्रास्फीति ०.३ प्रतिशत, सन् २०२२ सम्म १.३ प्रतिशत ४ महिना पहिले
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने एडीबीकाे प्रक्षेपण ६ महिना पहिले
तराईमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्यो : नेपाल राष्ट्र बैंक ७ महिना पहिले
व्यापार घाटामा झिनो सुधार : आर्थिक परिसूचक सकारात्मक ७ महिना पहिले
महँगीको उत्पात कायमै, पोहोर भन्दा यसवर्ष दोब्बर महँगी ८ महिना पहिले
उपत्यकामा चरम मूल्यवृद्धि ८ महिना पहिले
बसको ठक्करबाट एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु भर्खरै
डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ लुट्ने खेलबहादुर र रेलबहादुरको गिरोह पक्राउ ७ मिनेट पहिले
प्रदेश नं १ मा १८१ संक्रमित थपिए ११ मिनेट पहिले
यमनी सरकार र हुथी विद्रोहीबीच बन्दी आदान प्रदानको लागि सहमति १६ मिनेट पहिले
अब पीसीआरको रिपोर्ट सम्बधित व्यक्तिलाई मात्र दिने २२ मिनेट पहिले
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो “मेरी उनीलाई” मुद्दति खाता योजना २३ मिनेट पहिले
अर्थतन्त्रको बृद्धिदर शून्यको नजिक, अर्थविद् सोचमग्न ! ३२ मिनेट पहिले
कामै सम्पन्न नगरी ७५ लाख भुक्तानी ! ३६ मिनेट पहिले
संसारका खानीमा कति सुन बाँकी होला ? ५८ मिनेट पहिले